FBC - Maloota ‘Google’ irraa odeeffannoo ittiin barbaannu
Maloota ‘Google’ irraa odeeffannoo ittiin barbaannu
Finfinnee, Gurraandhala 1,2010(FBC)-Namni tokko toora intarneetiirraa odeeffannoo baafachuuf kompiitarasaa wayita banu yeroo baay’ee kan banu weeb saayitii ‘Google’ jedhamudha.
Weeb saayitii kanarraa odeeffannoowwan miliyoonatatti lakkaa’amantu taa’ee jira; haata’u malee, haala nuti odeeffannoo kanneen itti barbaannee argannu hammaa fi qulqullina odeeffannoo argannuu guddaa murteessa.
Nutis weeb saayitii ‘Google’ irraa odeeffannoo wayita barbaannutti maloota baay’inaa fi qulqullinaan odeeffannoo nuu argamsiisuu danda’an akka armaan gadiitti isinii dhiheessineerra:
Odeeffannoo barbaannu mallattoo waraabbii keessatti barresinee barbaaduu ‘ ’
Malli kun mala namoonni yeroo baay’ee itti fayyadaman dha; fuulota odeefannoo yookaan jechoota barbaadnu filatee nuu dhiheessa
Mallattoo urjii fayyyadamuun jechoota yookaan gaaleewwan hinbeekamne gaafachuu ( * )
Jecha yookaan gaalee hinbeekamne haaraa ta’e mallattoo urjii jechicha yookaan gaalee barbaannu dursinee barreessinee barbaaduun odeeffannoo wayyu argachuuf akka nugargaaru himama.
Jechoota hinfeene garuu gaalee barreessinu keessa kan jiran akka hinfidne yoo feene gaalee sana gidduutti mallattoo hir’isuu kaa’uu ( - )
Odeeffannoo barbaaduuf maqaa yookaan gaalee wayita barreessinu jecha tokko filannee odeeffannoo jechichaan qofa wal-qabate akka hinfidne yammuu feenu jecha sana gidduutti mallattoo hir’isuu fayyadamuun keessaa hambisuu dandeenya.
Garaagarummaa fi hidhata waantota lamaa beekuuf ‘ vs” fayyadamuun barbaaduu
Fakkeenyaaf irbaata keenya Bargarii yookaan Piizzaa nyaachuu feenee lamaansaanii wal-dorgomsiisuu yoo barbaanne ‘vs’ gidduusaaniitti wal-cinatti barreesuun yoo gaafanne odeeffannoo lachanii wal-cinatti argachuu dandeenya.
Suuraawwan suuraan fayyadamuun barbaaduu
Suuraa nama beeknuu kan nutti fakkaate eessaa akka dhufee fi suura wal-fakkaatu qabaateesaa addaan baasnee beekuu yoo feene fuula ‘google’ banuun furtuu suuraa itti kaasan kan fakkaattu cuqaasuun kompiitara keenyarraa weebsaayitichatti suuraa sana galchuun suuraa isa fakkaatu yookaan odeeffannoo argachuu dandeenya.
Maddi: Barruu Taayim
Oduuwwan Biroo « Koompiitarri maaf jaatanaa'a?	Moosaajii basaastuu »